[Shiyi] Ibuka ithala Ifulethi elikhulu elinamagumbi amathathu okulala eduze kwase-Hongyadong Jiefangbei Bayi Haochi Street Qiansimen Bridge Ukubuka komfula umugqa wokuqala iJi Ma
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-大师兄捉妖
U-大师兄捉妖 unokuphawula okungu-39 kwezinye izindawo.
U-大师兄捉妖 uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
1. Le ndawo isendaweni ephakeme kakhulu, eqhele ngamamitha angu-900 ukusuka kumzila ongaphansi we-Xiaoshizi. I-Chongqing West Railway Station, North Railway Station kanye nesikhumulo sezindiza zinemizila ehamba ngaphansi engafika ngqo esiteshini sase-Xiaoshizi. Isikhumulo sezindiza siqhele ngamakhilomitha angu-14 ngetekisi futhi kuthatha cishe isigamu sehora ukuya phansi komphakathi.
Kuwuhambo lwemizuzu emithathu noma emine ukusuka endaweni ebukekayo yase-Hongyadong, futhi kulula kakhulu ukuya ngqo e-Hongyadong usuka endaweni yokupaka engaphansi komhlaba yase-Hongyadong ebukekayo. I-Jiefangbei iqhele ngemizuzu eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili. Kulula ukuhamba.
2. Ohlwini, iprojektha ye-XGIMI, inethiwekhi engenantambo engu-100M, i-fiber optic entry yasekhaya, isifudumezi-moya esishisayo nesipholile, umshini wokuwasha, isiqandisi nezinye izinto zikagesi zasendlini, ikhishi elinezitsha zetafula, izinto zasekhishini, njll.
3. Kukhona nezibiliboco eziningi eduze kohlu, ibhodwe elidala elishisayo, olayini abade ngezansi kuma-noodle ebhentshi.
4. Ukuqashiswa kwemoto, amathikithi ezindawo ezibukeka kahle, amathikithi ohambo lwemikhumbi nezinye izinkonzo zinganikezwa
5. Indlu iyakwazi ukubona i-river view, enethala elihlukile. Izibani ngakolunye uhlangothi lwetiyetha zikhanyiswa ebusuku, nezikebhe ezihamba ngomfula ezidlula endaweni enhle.
6. Kukhona umshini we-mahjong ekamelweni, abantu abane bangenza imijikelezo emine kuyindingilizi, ibhodwe elishisayo.
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-39 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
3. Kukhona nezibiliboco eziningi eduze kohlu, ibhodwe elishisayo lika-Liu Yishou, kanye nama-noodle ebhentshi phansi akleliswe isikhathi eside.
U大师兄捉妖 Ungumbungazi ovelele